Radio gisa mainty • L'Express de Madagascar
Radio gisa mainty
Mitohana ny fifamoivoizana eto Antananarivo. Ny antsasaky ny andro dia lany ao anaty fiara. Ka mahatonga ny tena hitady radio. Indrisy anefa fa mbola tsy mandeha mivantana ao anatin’ny fiara rehetra ny radio avy any ivelany azo amin’ny «bouquet» Canalsat na Parabole (raha mba tena 4G ny hoe 4G, dia azo henoina amin’ny smartphone mivantana avy any lavitra rehetra any).
Hatramin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009, izay nandraisan’ny radio sasany anjara mavitrika, dia tsy mihaino radio gasy intsony aho, indrindra fa ireny misora-tena hoe «famakafakana politika» ireny.
Raha ny vovòn’ny mpiambin-tanàna ao an-dapa no asedra ny horakorakin’ny sahona eny an-dalambe, dia saina mandrorona ambany dia ambany no mitaiza ny Malagasy. Mampalahelo mantsy fa ireny fifanompana sy fifanendrikendrehana ireny no henon’ny sarababem-bahoaka any anaty taxibe na eny an-tsena.
Samy manana ny famaritany ny hoe demokrasia tokoa. Ny ahy manokana ny fahalalahana ara-demokrasia dia tsy zo hanompa sy hiteny ratsy na hanao tondro molotra olona na hanesika lainga tsara lahatra. Impiry anefa izany fifanajana izany no mba tanteraka hatramin’ny nisokafan’ny sehatry ny Radio tamin’ny 1991 ?
Andrandraintsika tokoa ny demokrasia any Eoropa na Amerika satria mba maha-sambatsambatra ny vahoaka any aminy : miaina ankalalahana, manana ambimbava, mandranto fianarana lafatra, mahazo manantena fitsaboana manara-penitra, tsy mitaintaina isan-tsegondra ny amin’ny halatra sy vaky trano na fanakanan-dalana sy fanafihana vohitra.
Ireny firenena ireny no tonga demokrasia tahaka izao dia nandalo sedra taranaka maro : tsy mana milatsaka avy any an-danitra mantsy ny demokrasia fa ezaka isan’andro ary ifandovan’ny zanaka, zafy, zafiafy, mifandimby. Mbola tamin’ny 1945 no nisy tao Eoropa izany Hitler izany, izany Mussolini izany, izany Staline izany. Jadona, habibiana, ady nandripaka olona an-tapitrisa maro, mbola vao 72 taona lasa fotsiny izay. Fa hain’ny olona tany no naka anatra : soa ho lavo hahay hamindra.
Nandray anjara goavana tamin’izany fiketrehana demokrasia izany ny gazety, ny boky, ny radio. Nitaiza tsikelikely, nanokatra ny saina, nampitombo fahalalana, namakafaka tantara, nitety kolontsaina isan-karazany, nivahiny tamin’ny firenena maro. Ny an’ny olona izany hoe avara-pianarana izany tsy atao faneso miharo fialonana fa nomena toerana hanao lanja miakatra ny besinimaro. Saina misandratra hatrany, fa tsy ory hava-manana, tsy hisintona hidaraboka, tsy hanetry ny nasondrotry ny tany.
Rehefa ny karazam-pandaharana hita sy re amin’ny radio France-Culture, National Geographic, Discovery Science, Histoires, no voazara amin’ny Malagasy isan-tokantrano, tsy ho vaky trano na fandrobana magazay na fanaovana kitay ny Radiom-pirenena intsony no ho fanehoan-kevitra, fifandimbiasam-pahefana, demokrasia, eto Madagasikara.
Vizana foana aho mitady radio gisa mainty : tsy misy hira hiakiaka-tabataba-dobodoboka manimba sofina ; tsy misy sain-jaza mivanitika sy miteniteny foana ; tsy misy mpaminany sandoka tampin-dalan-kaleha amin’ny boky iray dia iray ; tsy misy kobaka am-bava hanjono vahoaka amin’ny vary iray kapoaka ; tsy misy «famakafakana» poakaty…
Débats – Le patrimoine de l'océan Indien en question